सिल्टल - कसरी वेब पृष्ठहरू स्क्रैप गर्ने?
सुन्दर सूप एक पाइजोन पुस्तकालय हो जुन व्यापक रूप देखि एक पेस पेड को निर्माण गरेर वेब पृष्ठहरु लाई स्क्रैप गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ। XML र HTML कागजातहरूबाट. वेब स्क्रैपिंग, वेबसाइटहरु र पृष्ठहरु बाट डेटा निकालन को एक प्रविधी, डेटा विश्लेषण र प्रबंधन क्षेत्र मा व्यापक रूप देखि प्रयोग गरिन्छ. अधिकतर अवस्थामा, पाइजोन प्रोग्रामिङ भाषा डेटा विज्ञानमा आवश्यक छ.
पाइजोन3छ स्क्रैपिंग टूल्स र मड्यूल तपाईं आफ्नो डेटा प्रबंधन परियोजना मा आवेदन गर्न सक्छन्. वर्तमानमा सुन्दर सूप4को रूपमा चलिरहेको छ, यस मोड्युल पाइजोन3र पाइजोन2सँग मिल्दो छ. 7. सुन्दर सूप4मोड्युल पनि गैर-बन्द ट्यागको सूपको लागि पार्स पेड सिर्जना गर्न सक्षम छ. यो ट्यूटोरियलमा, तपाईंले कसरी पृष्ठ स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ र CSV फाइलमा स्क्रैप गरिएको डेटा लेख्नुहोस्.
सुरू गर्दै (1 9)
सुरू गर्न, तपाइँको पीसीमा सर्भर वा स्थानीय-आधारित पाइजोन कोडिङ वातावरण सेट अप गर्नुहोस्।. तपाइँले तपाइँको मेशिनमा सुन्दर सूप र अनुरोध मोड्युल स्थापना गर्नु पर्दछ. दुवै मोडलसँग काम गर्ने ज्ञान पनि एक आवश्यक शर्त हो. एचटीएमएल ट्यागिंग र ढाँचाको साथ परिचित पनि एक थप फाइदा हो.
आफ्नो डेटा बुझ्ने (1 9)
यस सन्दर्भमा, ग्लोबल सूप4कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्न मद्दत गर्नको लागि राष्ट्रिय ग्यालरीको कलाको वास्तविक डेटा प्रयोग गरिनेछ।. कलाको राष्ट्रिय ग्यालरीले 120,000 टुक्राहरू समावेश गरेको छ जुन 13 हजार कलाकारहरूको अनुमान गरिएको छ. कला वाशिंगटन डीमा आधारित छ. सी, संयुक्त राज्य अमेरिका.
सुन्दर सूप संग वेब डाटा निकासी जटिल छ कि छैन. उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले अक्षर Z मा फोकस गर्नुभयो भने, सूचीमा पहिलो नामलाई ध्यान दिनुहोस् र नोट गर्नुहोस्. यस अवस्थामा, पहिलो नाम Zabaglia, निककोला हो. स्थिरताका लागि, पृष्ठहरूको संख्या र त्यस पृष्ठमा अन्तिम कलाकारको नाम संकेत गर्नुहोस्.
अनुरोधहरू र सुन्दर सूप पुस्तकालय कसरी आयात गर्ने (1 9)
पुस्तकालयहरू आयात गर्न, तपाईंको पाइजन3प्रोग्रामिंग वातावरण सक्रिय गर्नुहोस्. तपाईंको प्रोग्रामिङ वातावरणसँग एकै डाइरेक्टरीमा निश्चित हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्. सुरू गर्न निम्न आदेश चलाउनुहोस्. my_env / bin / activate.
नयाँ फाईल सिर्जना गर्नुहोस् र आयात सुरु गर्नुहोस् सुन्दर सूप र अनुरोध पुस्तकालयहरू. लाइब्रेरी अनुरोधले तपाईंलाई पढ्न योग्य ढाँचाहरूमा तपाईंको पाइजनको प्रोग्राम भित्र HTTP प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ. अर्कोतर्फ सुन्दर सूप, छिट्टै पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न कार्य गर्दछ. सुन्दर सूप आयात गर्न बी एस4प्रयोग गर्नुहोस्.
वेब पृष्ठ कसरी संग्रह र पार्स गर्ने (1 9)
अनुरोधहरू प्रयोग गरेर तपाईंको पहिलो पृष्ठ URL. पहिलो पृष्ठको URL चर पेजमा तोकिएको छ. अनुरोधहरूबाट एक सुन्दर एसप वस्तु बनाउनुहोस् र पाइजोनको पार्सरबाट वस्तुलाई पार्स गर्नुहोस्.
यो ट्यूटोरियलमा, उद्देश्य लिङ्कहरू र कलाकारहरूको नामहरू एकत्र गर्ने हो. उदाहरणका लागि, तपाईं कलाकारहरूको मितिहरू र राष्ट्रीयताहरू जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ. विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूका लागि, कलाकारको पहिलो नाममा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्. यस अवस्थामा, Zabaglia, निकोकोला प्रयोग गर्नुहोस्. म्याक OS प्रयोगकर्ताहरूको लागि, "CTRL" ट्याप गर्नुहोस् र नाम क्लिक गर्नुहोस्. "एनिमेसन एनिमेसन" मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईंको पर्दामा पप अप वेब विकासकर्ताहरूको उपकरणहरूमा पहुँच गर्न. सुन्दर सूप बनाउनको लागि कलाकारको नामहरू बाहिर छाप्नुहोस् छिट्टै एक रूख पार्स गर्नुहोस्.
तलका लिङ्कहरू हटाउँदै (1 9)
तपाईंको वेब पृष्ठमा तल्लो लिङ्कहरू हटाउनको लागि, DOM निरीक्षण गर्नुहोस् तत्वलाई दायाँ क्लिक गरेर।. तपाइँ पहिचान गर्नुहुनेछ कि लिङ्कहरू एचटीएमएल तालिकामा छन्. सुन्दर सूप प्रयोग गर्दै, पार्स पेडबाट ट्यागहरू हटाउन "भ्रामक विधि" प्रयोग गर्नुहोस्.
सामग्रीलाई कसरी टाढाबाट टाँस्न सकिन्छ (1 9)
तपाइँसँग सम्पूर्ण लिङ्क ट्याग मुद्रण गर्न छैन, सुन्दर सूप प्रयोग गर्नुहोस् ट्यागबाट हटाउनको लागि।. तपाईं सुन्दर सूप4प्रयोग गरी कलाकारहरूसँग सम्बद्ध यूआरएलहरू पनि खिच्न सक्नुहुन्छ.
सीएसवी फाइल (1 9) फाइलको लागी स्क्रैप गरिएको डाटा
सीएसवी फाइलले तपाईँलाई ढाँचागत डेटा भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ सादा पाठमा, ढाँचा जुन डेटासेटका लागि प्रयोग गरिन्छ।. पाइजोनमा सादा पाठ फाइलहरू हस्तान्तरण गर्न ज्ञान सिफारिस गरिएको छ.
पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न र जानकारी प्राप्त गर्न वेब डेटा निकासी प्रयोग गरिन्छ. तपाईंले निकासी जानकारीबाट वेबसाइटहरूको ध्यान राख्नुहोस्. केहि गतिशील वेबसाइटहरु लाई आफ्नो साइटहरुमा वेब डेटा निकासी लाई प्रतिबंधित गर्दछ. सुन्दर सूप र पाइजोन3को साथ पृष्ठ स्क्रैप गर्न सरल छ Source .